Vhidhiyo nyowani yakapfurwa nedrone inotiratidza ins uye kubuda kweinotevera Steve Jobs Theatre | IPhone nhau
Imwe yenyaya dzakakosha kwazvo dzegore kuApple dzimbahwe chinhu chisinei nechinhu chero chinhu: kuvhurwa kwe Apple paki, iyo itsva Apple dzimbahwe. A nzvimbo nyowani umo vakomana veCupertino vanozotenderedza ese epakati mahofisi yekambani. Yakagadzirwa naNorman Foster timu, ivo vanogona kunge vari ivo vane hunyanzvi hwetekinoroji munyika, uye zviri pachena kuti kuratidzwa kwepasirese pasina mubvunzo chichava chiitiko chakakosha chaizvo.
Kutama kwakatanga muna Kubvumbi apfuura, kunyange chokwadi ndechekuti kuchine basa rakawanda kumberi. Apple Park inosanganisira anphitheatre, iyo Steve Jobs Theatre, yemitambo iyo pasina mubvunzo ichave inzvimbo iyo vakomana veCupertino vatiratidze zvinotevera zvinotevera zvigadzirwa zvekambani. Uye mukushaikwa kwehurukuro yepamutemo, pakave nevazhinji vashandisi veYouTube vanga vachisefa mavhidhiyo ezvivakwa zvakanyorwa nema drones. Nhasi tinokuunzira imwe nyowani matinogona kutoona kufungidzira kweizvo zvichave zvezuva nezuva basa kuApple Park, kuwedzera kune nguva ino tinogona zvakare kuvhenekerwa Steve Jobs Theatre ... Mushure mekusvetuka tinokuratidza iyi vhidhiyo nyowani kuti ugone kunakidzwa neApple Park nyowani.
Vhidhiyo yawakakwanisa kuona yakapfurwa Duncan Sinfield, anoshanda nedrone anga achititaridza Apple Park kwemakore maviri, uye iyi vhidhiyo yake ichangoburwa yakapfurwa mazuva mashoma apfuura, pakupera kwaJune. Isu tinoona kufambira mberi kwehuswa huchave hune chinzvimbo chakakosha muApple Park, kunyangwe pasina mubvunzo chinonyanya kuzivikanwa ndeche Steve Jobs Theater kufambira mberi, kubva kwatinogona kuona yayo horo huru nekuda kwemahwindo mahombe inoikomberedza uye mwenje wemukati wechivako. A Steve Jobs Theater iyo ichave neakakura kabhoni fiber deck pasirese.
Saka mukushaikwa kwehurukuro yepamutemo, tinoramba tichiwana mazino marefu tichida kuziva zvese nezve iyi Apple Park. Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti vakomana vanobva kuCupertino vapedzise zvese uye vatange kupa zvigadzirwa mukati meSteve Jobs Theatre. Ko iyo inotevera iPhone ichave yekutanga kuvhura iyo Steve Jobs Theatre? Tichamirira mwedzi waGunyana kuti tizive ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vhidhiyo nyowani yakapfurwa ne drone inotiratidza ins uye kubuda kweinotevera Steve Jobs Theatre